I-Marlay View Cottage. Kanokusho, yesimanje, ivulekile. - I-Airbnb
I-Marlay View Cottage. Kanokusho, yesimanje, ivulekile.
Stanthorpe, Queensland, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Renae
U-Renae Ungumbungazi ovelele
IMarlay View Cottage iyindlu yesimanje, enamagumbi okulala amathathu eQueenslander, etholakala enhliziyweni yeStanthorpe.
Le Cottage ilungele iholide lakho lomndeni elilandelayo, uhambo lokuhamba ngothando noma uhambo lweqembu.
Nethezeka futhi uphumule ngebhodlela lendawo lewayini kubhavu omkhulu we-spa, jabulela ukushona kwelanga usuka endaweni enkulu yokuzijabulisa engaphandle kuyilapho izingane zidlala egcekeni elivulekile, elivalekile noma zigoqe eduze kweziko ngencwadi evela kumtapo wolwazi wase-Cottage, lesi sikhala. ihlelwe ukuthi ibe 'yikhaya lakho kude nasekhaya'.
I-Cottage iwuhambo lwemizuzu emi-5 kuphela ukuya e-CBD futhi inikezela ngamakamelo okulala amathathu amakhulu anamagumbi okugeza amabili anezindlu zangasese kanye neshawa eyengeziwe eneze.
Lapho ufika, uzothola i-Gift Basket yamahhala egcwaliswe ngemikhiqizo yasendaweni, eyenziwe ngezandla ukuze uyijabulele futhi uzijabulise ngayo, okuhlanganisa ibhodlela lewayini le-Ballandean, ibha yensipho edumile yase-Washpool kanye nesikhumbuzo se-Marlay View Cottage Linen Tea Towel.
I-Master Bedroom inombhede olingana neNdlovukazi futhi inomtapo wolwazi omncane onazo zombili izincwadi zezingane nezabantu abadala, hamba ngengubo enesikhala esilengayo kanye nokufinyelela okuyimfihlo endlini yokugezela enkulu enobhavu we-spa nendlu yangasese enkulu.
Igumbi lokulala lesibili linombhede olingana neNdlovukazi futhi linendawo yokugezela eneshawa, ikhabethe lezingubo kanye nendawo yokulenga kanye nokufinyelela komuntu siqu kuvulandi ongaphambili.
Igumbi lokulala lesithathu linemibhede emibili Eyodwa futhi linekhabethe elinendawo yokulenga kanye nokufinyelela komuntu siqu kuvulandi ongaphambili.
Ikhishi linempahla yesimanjemanje, umshini we-K-fee weCoffee Pod onePods, isitofu segesi, isiqandisi sewayini, ifriji/ifriji, ibhentshi lebhulakufesi elinezihlalo, I-Pantry, Umshini wokuwasha izitsha, iCrockery, I-Cutlery, i-Drinkware, Isethi Yokudla Yezingane, I-Microwave, Ithosta , I-Milk Frother negedlela.
I-Lounge Room inama-recliner amathathu amakhulu, i-Armchair entofontofo, i-Smart TV, i-Netflix, i-GoogleChrome, i-Blankets, i-Board Games, i-Blu-Ray DVD player nokukhethwa kwama-DVD, i-Foxtel kanye ne-Fireplace enonogada ophathwayo.
I-Dining Room ine-Dining Suite enezihlalo eziyisithupha, i-Bi-Fold Doors enkulu evuleleka kumpheme ongemuva kanye ne-wood Pizza Oven.
Indawo enkulu yokuzijabulisa yangaphandle engemuva kwendlu ine-5-seater Lounge Suite enama-recliners nokubukwa kwezintaba ezinhle ngemuva kwe-Stanthorpe.
I-Verandah engaphambili ineNdawo Yokuhlala Enhle eneziqephu ezintathu ukuze uphumule futhi ujabulele inkomishi yetiye eshisayo noma ingilazi ethandekayo yewayini lendawo kanye noqwembe lokudla ukuze uthole ukubuka okuhle kwe-Mt Marlay.
I-Cottage iphinde ibe nendawo eningi yokuthi izingane zidlale futhi zihlole izingadi, amaphedi kakhonkolo ukuze izingane zishibilike, zigibele amabhayisikili, zidlale iHopscotch noma zenze umsebenzi wobuciko omuhle ngoshoki.
I-HDTV ene- I-Chromecast, I-Netflix, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
URenae Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Stanthorpe namaphethelo